I-Zen Den- Downtown Loft ene-Private Hot Tub
Siyakwamukela, futhi siyabonga ngentshisekelo yakho ku-"Zen Den." Lesi sikhala esihle, esiyingqayizivele silungele umuntu ohamba yedwa, ngebhizinisi, izithandani, noma umndeni omncane ofuna ukujabulela iMcCall ngokugcwele. Izinyathelo nje ukusuka ezindaweni zokudlela nezitolo ezinovulandi oyimfihlo kanye nobhavu oshisayo ukuze ubambe usuku oluhle ezintabeni zasentshonalanga emaphakathi ne-Idaho. Sibheke ngabomvu ukukubona nokusiza ukuqinisekisa ukuthi uyayijabulela le ndawo njengoba senza!
Le yunithi ifakwe i-microwave, ipuleti elishisayo elishisayo, nohhavini we-toaster omkhulu, kanye nezidingo zokupheka ezigcwele ekhishini. Ezinye izinsiza zifaka ikhebula ne-smart TV, iBluetooth Stereo, i-WIFI yamahhala nendawo yokugezela eshisayo!
4.97 ·349 okushiwo abanye
4.97 · 349 okushiwo abanye